Falaqayn Sharci Oo Ku Saabsan Khilaafka Golaha Wakiilada. |
Intaa ka dib waxaa war-baahinta ka soo muuqday Xildhibaan Talyanle oo leh doorashada anigaa guulaystay oo tirada hal-dheeriga
Sida xeer-hoosaadka goluhu dhigayo, markii CV-yada laba xildhibaan la akhriyey, qudbadahoodiina la dhagaystay, waxa uu guddoomiyihii shirka Golaha Guddoominayey bilaabay in loo kala codeeyo xildhibaan ee tartamayey. Sida laga wada war hayo waxa doorasha loogu dhawaaqay in uu ku guulaystay Baashe Maxamed Faarah, halka xildhibaankii la tartamayeyna uu hambalyeeyey. Intaa ka dib waxaa war-baahinta ka soo muuqday Xildhibaan Talyanle oo leh doorashada anigaa guulaystay ooSida aad ka wada war haysaan waxaa jira khilaaf baahsan oo u dhaxeeya Golaha Wakiilada kaas oo ka dhashay doorashiidii Guddoomiyaha Golaha Wakiilada. Guddoomiyanimada Golaha waxaa u tartamayey laba xildhibaan oo kala ah Xil. Cabdiraxman Maxamed Talyanle iyo Xildhibaan Baashe Maxamed Faarah.